Soo dejisan PlayerPro 3.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: PlayerPro
PlayerPro – fudud ah si ay u isticmaalaan ciyaaryahanka warbaahinta u ciyaaro files warbaahinta. PlayerPro taageertaa loo maqli karo ee ugu qaabab warbaahinta caanka ah oo kuu ogolaanaya in aad tags u qaabab sida xaalkaa: MP3, FLAC, WMA, WAV, M4A, MP4, iwm software ayaa u saamaxaaya in ay kala qaybiyaan walxuhu ka galay hadalyo gaar ah, albums, Playlists iyo fayl. PlayerPro ku jira goolkii barbaraha multiband oo u saamaxaaya in ay dalban saamaynta adag maqal ah. Software waxay leedahay interface ah dareen leh oo kuu ogolaanaya in aad Customize muuqaalka adigoo isticmaalaya qolfaha.
Ciyaaryahan warbaahinta habboon in la ciyaaro files warbaahinta
Edit of tags
Isticmaalka saamaynta audio casri ah
Soo dejisan PlayerPro
Faallo ku saabsan PlayerPro
PlayerPro Xirfadaha la xiriira
AIMP – ciyaaryahan awood leh oo taageera qaababka codka caanka ah. Softiweerku wuxuu ka koobanyahay isbarbardhigga kumbuyuutarrada badan si loogu habeeyo tayada codka codka feylasha.
Qalabka loo qaabeeyo faylasha warbaahinta ee kaydinta daruurta. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u timaaddo helitaanka faylasha qalabka kala duwan.
software The si ay ula socdaan isticmaalka xogta mobile. software The lafaguraa iyo bandhigayaa xaddiga gaadiidka by codsiyada kala duwan loo isticmaalo muddo waqti go’an.